Henjanin’i Kolombia Ny Sazy An-tranomaizina Ho An’ny Fanafihana Amin’ny Asidra · Global Voices teny Malagasy
Henjanin'i Kolombia Ny Sazy An-tranomaizina Ho An'ny Fanafihana Amin'ny Asidra
Voadika ny 05 Febroary 2016 3:42 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Deutsch, Français, English, Italiano, Español
Sary nindramina tamin'ny kaonty Facebook-n'i Natalia Ponce de León.
Amin'izao fiandohan'ny taona 2016, nolanian'i Kolombia ny Lalàna 1773. Fantatra ihany koa amin'ny hoe Lalàna Natalia Ponce de León, manenjana ny sazy no sady manafoana ireo fanamaivanana sasantsasany omen'ny lalàna ho an'ireo nanatanteraka fanafihana tamin'ny asidra na vokatra simika. Ny anaran'ny iray tamin'ireo niharam-panafihana no entiny, izay ny tranga nanjo azy no nandrehitra ny adihevitra momba ny fahabangàn'ny lalàna manodidina io karazana herisetra io ao amin'ny firenena.
Notsipihan'i Juan Manuel Santos, filoha kolombiana, ny maha-zavadehibe ny fametrahana lalàna afaka “mampivady ireo fepetra sy mandrindra ireo sampan-draharaha samihafa hiatrehana io fanimbazimbàna ny maha-olona io, amin'ny fomba tsara indrindra mety ho vita”.
Vahiny manokana tamin'ny lanonana fanambaràna ilay lalàna i Natalia Ponce de León, mariky ny tolona fanoherana ny fanafihana amin'ny asidra ao Kolombia. Nandritry ny lanonana, nasehony ny endriny, izay norakofany sarontava foana hatrizay, taorian'ireo fandidiana efa ho 20 natao azy. Naneho ny fankasitrahany ny filoha, ary koa ireo izay nitoto nahafotsy, nahandro nahamasaka ity lalàna ity i Rtoa Ponce, izay nitolomany tamin'ny alàlan'ny “fondation” naoriny.
Tamin'ny 2014, Natalia, 33 taona, dia niharan'ny herisetran'ny tovolahy iray nila sotasota taminy teo amin'ny efitrano fidirana ny tranony tao Bogotà. Tantarainy ho an'ny gazety mpiseho isanandro El Pais ny tantarany :
Nanandrana ny hamono ahy izy, feno may manerana ny vatako, ny tarehiko no simba tanteraka, very amin'ny ampahany ny fahitàko, nahatelina asidra aho, izay nahavoa ny làlan-drivotro, tsy afaka niverina niasa intsony, amin'izao fotoana dia manompana ny androko ho amin'ny fahasitranako, fandidiana 16 no efa natao ahy ary mbola betsaka no miandry ahy, indraindray eo ny rarintsaina, ny alahelo. Nefa mitohy ny fiainana ary mbola eto aho mba hiroso hatrany eo am-piandrasana ny fandresen'ny rariny.
Asehon'ny tarehimarika avy amin'ny ivontoerana kolombiana momba ny fitsaboana miasa ho an'ny fitsaràna fa 56 ireo vehivavy niharan'ny fanafihana tamin'ny asidra tamin'ny 2010, 46 tamin'ny 2011 ary 80 tamin'ny 2012.
Niantso ny fiarahamonina mba hanohana ny fandraisana andraikitra iray vaovao nataony ihany koa i Rtoa Ponce, hetsika mikendry ny hanangana sampana iray hiahiana ireo tratry ny fahamaizana.
Raisin'ilay lalàna vaovao ho karazana heloka manokana ity karazana fanafihana ity. Lasa 20 taona ny sazy 15 taona sy 5 volana taloha, raha toa ny niharam-boina ka mizaka ratra mamela takaitra tsy azo ivalozana. Raha zavatra maharitra no hozakain'ilay niharam-boina, toy ny tranga nanjo an'i Natalia, dia tafakatra ho 30 taona na mihoatra ny sazy raha 20 taona sy 9 volana teo aloha. Saingy raha simba tanteraka ny endrik'ilay niharam-boina, dia mety mbola hiampy ampahatelon'izay ny sazy.
Nahazo fanohanana mivaingana tety anaty tambajotra sosialy ny asan'i Natalia sy ny “fondation” najorony. Sarihan'i Ricardo Galán ny sain'ny ministeram-bahoaka hijery ny amin'ilay nanao herisetra tamin'i Natalia, izay any am-ponja miandry ny fitsaràna azy :
— Ricardo Galán (@RicardoGalanO) 19 Janvier 2016
Misy mahafantatra ve raha toa nenjehin'ny @FiscaliaCol [ministeram-bahoaka kolombiana] eny amin'ny fitsaràna ilay nanao herisetra tamin'i Natalia Ponce? Midika inona ho azy ny fanànana lalàna mitondra ny anarany, raha toa ka tsimatimanota tanteraka no vokany ?
Manome voninahitra ny filoha i Juan Davíd C no sady mitanisa lalàna hafa iray nolaniana ihany koa :
— Juan David C. (@JuanDavidC_) 6 Janvier 2016
Tsy maintsy ankasitrahana izay mitondra zavatra tsara ary faly aho fa nosoniavinao ny lalàna manohitra ny fomba fitondra tsy an-drariny atao amin'ny biby sy ny manenjika ireo fanafihana amin'ny asidra, misaotra
Raha mifaly koa ny sasany toa an'i Alina Mican :
— Alina Mican (@Alisamic) 19 Janvier 2016
Ny lalàna Natalia Ponce, fandrosoana goavana hanenjehana ny tsimatimanota ary hiadiana amin'ireo fanafihana amin'ny asidra ao Kolombia. Nandresy Carlos Guevara sy ny MovimientoMIRA [hetsika politika kolombiana]
Saingy notoherin'ny sasany kosa ny anarana nomena ilay lalàna :
— EscorpionXCO (@EscorpionXCO) 17 Janvier 2016
Tsy tokony hitondra ny anarana Natalia Ponce ny lalàna manenjika ireo fanafihana amin'ny asidra. Ho fanajàna ireo vehivavy an'arivony niharan'izany talohany (farafaharatsiny, mba mody mihatsaravelahitsy mahatsiaro azy ireny ianareo)
Miaraka amin'ny tenifototra #‎NoMásAtaquesConÁcido sy #NoMásÁcido [Lavina ny fanafihana amin'ny asidra, Lavina ny asidra], nanohana ampahibemaso an'i Natalia ireo mpampiasa Twitter. Ity ny bitsik'i Jorge Peñuela :
— jorge peñuela (@JorgePh_01) 19 Janvier 2016
#NataliaPonce endriky ny hery, ny tolona ary ny famelàna. Lavina ny fanafihana amin'ny asidra mba ho fanajàna ny aina, ny zo hiaina anaty fahalemana.
Felipe Potes koa naneho hevitra :
— Felipe Potes (@potesituation) 19 Janvier 2016
Fo vato vao mahavita manondraka asidra olona izany… AMPY IZAY !
Farany, mazava tsara ny tenin'i Natalia Ponce ao amin'ny kaontiny Twitter :
— NataliaPonceDeLeón (@OrgNPDL) 26 Novembre 2015
Velona indray avy amin'ny lavenony ny “phénix”, tsy misy hafa amin'ny Fondation Natalia Ponce de León Lavina ny asidra